Momba anay - Hebei Senton International Trading Co., Ltd.
Hebei Senton dia orinasa mpivarotra varotra iraisam-pirenena matihanina any Shijiazhuang, Sina. Ny asa lehibe dia misy ny famonoana bibikely ao an-trano, famonoana bibikely, fiompiana biby, fanaraha-maso Fly, API & mpanelanelana. Miantehitra amin'ny mpiara-miasa maharitra sy ekipa efa za-draharaha. Izahay dia manolo-tena hanome ny vokatra mety indrindra sy ny serivisy tsara indrindra hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa. Ny fahamendrehana, ny fanoloran-tena, ny asany, ny fahombiazany no fitsipika ifotoranay, izay fepetra amin'ny fanaovana raharaham-barotra. Mampihatra fitondran-tena tsara amin'ny kaliberista avo indrindra izahay. HEBEI SENTON, ilay namanao azo antoka, andao hiara-hiasa ho amin'ny ho avy tsaratsara kokoa!
2004: Shijiazhuang Euren trading co., Ltd. dia natsangana ho iray amin'ireo orinasam-panafarana sy fanondranana tsy miankina voalohany ao Shina.
2009: noforonina Senton international voafetra tao Hongkong ho fanitarana ny orinasa sy ny fanovana ny fangatahana eo amin'ny tsena.
2015: mpiara-miasa iraisam-pirenena momba ny varotra Hebei Senton., Ltd. dia naorina vao haingana tao Shijiazhuang Hebei China, novidin'ny Euren (CHINA) sy Senton (HK) mba hampivelarana ny tsena iraisam-pirenena.
Ny fandrosoantsika fandefasana:
Rafitra famatsiana: napetraka ny lalàna mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra satria ny materialy dia fototra amin'ny famokarana, ny fomba fizahana ny fanekena, ny fitiliana ara-materialy no ilaina ary ny fampiharana ireo akora mahay no aorian'ny fanamafisana.
Rafitra fitantanana ny famokarana: napetraka ny lalàna mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra satria ny materialy dia fototr'izany amin'ny famokarana, ny fomba fizahana ny fanekena, ny fanaraha-maso ny fitaovana no ilaina ary ny fampiharana ireo akora mahay no aorian'ny fanamafisana.
Rafitra QC: Mamita ny fomba fitahirizana angon-drakitra elektronika,
Rafitra fanangonam-bokatra: Rehefa mitohy ny fomba fanekena, ny mpiasa ao amin'ny trano fanatobiana entana dia tsy maintsy manamarina ny fanamafisana ny marika dia tsara ary ny atin'ny marika dia fenitra miaraka amin'ny fampahalalana feno. na simba amin'ny kankana amin'ny fampitahana ny fividianana takelaka fanaraha-maso sy ny COA avy amin'ny mpamatsy, ao anatin'izany ny mombamomba ny anaran'ny vokatra, ny famaritana, ny habetsahany, ny isa ary ny mombamomba ny mpamatsy. Ny mpiasa ao amin'ny trano fanatobiana entana dia mahazo alalana handà ireo fitaovana tsy voamarina ary hampahafantatra ilay tompon'andraikitra amin'ny fividianana.
Rafitra fanaraha-maso alohan'ny fanaterana
Rafitra aorian'ny fivarotana
Azonao atao ny mifandray aminay amin'ireto fomba manaraka ireto.
Telefaona: 86-0311-68001160 / 65